Warshad Xalka Qiyaasta Adag | Soosaarayaasha iyo Soosaarayaasha Xalka Qiyaasta Qiyaasta Shiinaha
Z Z Mashiinka Buuxinta Kaabsal
Z Mashiinka buuxinta kaabsulka taxanaha ah ayaa si gaar ah loogu talagalay buuxinta daroogada ee kaabsoolooyinka adag, iyo moodooyinka kala duwan ee mashiinada ayaa la heli karaa Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa buuxinta noocyada kala duwan ee daroogada sababtoo ah ujeedooyinkeeda badan, shaqo fiican, waxqabadka lagu kalsoonaan karo iyo buuxinta saxda ah. Waxay leedahay naqshad gaar ah waxayna dhammaystiri kartaa buuxinta isku dhafan ee daroogooyinka kala duwan ee isla kaabsoolka ah.
S Mashiinka saxaafadda Tablet Table
Mashiinka saxaafadda ee taxanaha 'S series' waxaa loogu talagalay inuu bixiyo xalal wax ku ool ah oo kiniiniga lagu riixo kuna saleysan baahida isticmaalayaasha. Deggenaashiisa iyo isku halaynteeda ayaa lagu aqoonsan yahay warshadaha, iyo hawlgalkeeda fudud, xakamaynta dabacsan iyo otomatigga ayaa si ballaaran loo ammaanay. Isla mar ahaantaana, waxay ku siin kartaa kiniinno laba-lakab ah iyo xalal kiniinno waxtar leh, oo siinaya dadka isticmaala fursado kala duwan oo kiniin ah oo riixaya.
Qalabka Taxanaha Daahan G
Mashiinka wax lagu duubo ee taxanaha 'G' wuxuu farsameyn karaa qaab kasta iyo cabir kasta oo alaab ah, waana aaladda ugu fiican ee loogu talagalay daaha filimka kaniiniyada, duubista filimka kaniiniyada yar-yar, maqaarka sonkorta, maqaarka pellets iyo lakabaynta. Nidaamka qalajinta ee loo yaqaan 'patent qalajinta' ayaa si weyn u horumarin kara waxtarka qalajinta iyo tayada wax soo saarka.
Qalabka Taxanaha dahaarka P daloolin
P mashiinka daahan daloolin daaran waa shey heer caalami ah oo qaata tiknoolajiyada ugu dambeysa ee daahan. Waxay isku daraysaa faa'iidooyinka dhammaan mashiinnada wax lagu duubo ee suuqa caalamiga ah ee hadda jira waxayna la kulmaan shuruudaha ugu dambeeyay ee warshadaha dawooyinka ee go'doominta mashiinka iyo nadiifinta, taas oo lagu gaari karo wax soo saar dhammaystiran oo dhammaystiran, yareynta soo-gaadhista maaddooyinka firfircoon iyo kordhinta ilaalinta nabadgelyada ee hawlwadeennada.
DG Granulator taxane ah
Qalabka qalalan ee qalalan waa nooc ka mid ah qalabka ilaalinta deegaanka oo leh maalgashi hooseeya, waxtarka sarreeya, keydinta tamarta iyo wasakheyn la'aan. Nidaamka isugeynta, sameynta, burburin iyo granulator ee qurubyada qalalan by extrusion farsamo waxaa lagu fuliyaa iyadoo la isticmaalayo biyaha crystalline ee wax laftiisa.
HLSG Taxanaha Qoyan Granualator
Taxanaha LGL Qalajiyaha Sariirta Dheecaan
qalajiyaha sariirta dareeraha ah ayaa dhaqso iyo gooni loo beddeli karaa, taas oo si fiican u buuxin karta shuruudaha GMP. Qalajiyaha sariirta ee dareeraha ah illaa iyo 12 bar, oo waafaqsan ATEX, ayaa lagu bixin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha.